Xukuumadda oo fariin Deg-deg kasoo saartay xaalad adeg oo ka jirta dalka | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xukuumadda oo fariin Deg-deg kasoo saartay xaalad adeg oo ka jirta dalka
Xukuumadda oo fariin Deg-deg kasoo saartay xaalad adeg oo ka jirta dalka
Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Xukuumadda ee xilka sii-haya Xasan Cabdinuur Cabdi ayaa ku baaqay in si deg deg ah gurmad biyo dhaamin loo gaarsiiyo bulshada ku nool Gobolka Gedo.
Xasan Cabdinuur Cabdi ayaa sheegay in biyo la’aanta ka jirta qaar ka mid ah gobolada dalka ay keentay roobabkii deyrta oo aan weli ka da’in gobolada dalka, taasi oo ka dhalatay biyo yari iyo abaaro ku dhuftay qeybo ka mid ah gobollada dalka.
“Abaarta waxa ay ku dhufatay deegaanno ku yaala Maamul Goboleedka Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, Hay’adda Unicef ayaa ka soo jawaabtay codsigii ahaa in dadka abaartu saameysay biyo dhaamin loo sameeyo, waxaana ay biyo dhaamin ka bilaawday afar magaalo oo gobolka Gedo ah oo ay ka midyihiin Baardheere, Buurdhuubo, Luuq iyo Doolow” ayuu yiri Wasiirka Tamarta.
Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka biyaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay gacan weyn ka geystaan sidii loogu gurman lahaa walaalaha Soomaaliyeed ee ay biyo la’aantu saameysay.
Maqaal horeQM oo ciidamada Eritrea ku eedeysay inay dad rayid ah ku laayeen G/Tigray ee Itoobiya
Maqaal XigaDowladda Jabuuti oo War kasoo saartay tallaalka Cudurka CORONAVIRUS